Izitimela zaseRussia zinezindawo zokungcebeleka eziningana zeminyango ezisezindaweni ezahlukene zezwe. Sizochaza enye yazo kusihloko sethu. Eduze le ndawo yokubhuka umuzi waseKrov. "I-Sosnovi Bor" yindawo yokuhlenga, eyiminyango, kodwa iyamukela ukwelashwa kubo bonke abantu, futhi abasebenzi bezitimela zaseRussia namalungu abo omndeni bangafika lapha imvume yokubambisana. Iphrofayela yalesi sanatori, izimo zokuhlala, izinsizakalo zezokwelapha, izici zokudla, ikakhulukazi, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka yini ukuba zibheke etafuleni lokudla - zonke lezi zindaba zizoxoxwa kulesi sihloko. Futhi sizobe sibheke inqubomgomo yentengo ye-resort yezempilo, ukubuyekezwa ngakho futhi unike oxhumana nabo kule nhlangano yezokwelapha-indawo: ikheli layo kanye namathelevoni.
Uphi isikhungo sezempilo nokuthi ungafika kanjani?
I-Sanatorium "iSosnovy Bor" igama layo alilona ngengozi. Itholakala ngokukhululekile phakathi kwehlathi le-coniferous ebhange lomfula i-Ivkinki. Indawo lapho kuhlala khona indawo yezempilo, izakhamuzi zaseKirov zibheka njengokuzilibazisa. Azikho amabhizinisi ezimboni, okusho ukuthi isimo sezinto eziphilayo sihle kakhulu. Ikheli lesikhungo seminyango kanje: Isifunda sase-Orichevsky, indawo yokubhuka yaseNizhnevyvkino, indawo yokuhlushwa "iSosnovy Bor" (Kirov). Amakholi wezokuphatha: +7 (8332) 78-33-34, +7 (8332) 78-71-91. Ukuze ufike esiteshini sezempilo ngezithuthi zakho, kufanele usuke edolobheni laseKirov eceleni komzila waseSoviet. Cishe amakhilomitha angamashumi amathathu nantathu kamuva kuzoba ne-turn nge-sign road "iSanatorium-dispensary" Sosnovy Bor ". Kuyinto elula kakhulu ukufika kule sikhungo nasebhasini - isiteshi sitholakala ngamamitha angamakhulu amahlanu ukusuka esiteshini sesitimela. Umzila webhasi inombolo 112 uhamba esiteshini esikhulu sebhasi saseKirov futhi ulandele ngqo esiteshini sempilo (indawo yokugcina iyona dolobha yaseNizhneivkino).
Indawo yesifunda sezempilo
Ukuthola ngokwayo phakathi kokuthula nokuthula, omunye umane nje akakholelwa ukuthi amakhilomitha ambalwa nje enyakatho i-Kirov yezimboni iyaxokozela. "Ihlathi lePine" - indawo yokuhlanza, esekelwe ogwini lomfula omncane ophakathi kwehlathi elihle le-coniferous. Njengoba igcwele ama-phytoncides nama-air ions alula, umoya ngokwawo unomphumela omuhle wokudambisa futhi we-bactericidal. Kunconywa ngokukhethekile ukuza lapha kubantu abanezinkinga eziphezulu zokuphefumula.
Insimu yesikhungo sezempilo ivikelwe. Ephakathi kwehlathi kunezakhiwo ezinhlanu zokulala zendawo yokulala. Zonke zazo ziyi-storey ezimbili, uhlobo lwe-cottage. Izakhiwo ze-spa, isakhiwo sezokwelapha, igumbi lokudlela. Insimu ihlelwe ngendlela efana nokudala umoya wokuphumula okuphezulu: kunezindlela eziveziwe eziphakathi kwamapayipi, kukhona i-gazebo, izindawo zepikinikini nebhasi. Ebhange lomfula kunamapulatifomu wokwakha. Isikhungo sezempilo samukela abavakashile unyaka wonke, futhi ukubuyekezwa kuthi ngesikhathi sasebusika kuhle kakhulu ehlobo, njengoba i-boron iba yindaba yamaphupho amhlophe. Lena indawo enhle kakhulu yokudumala.
Uma udinga ukufika emzaneni oseduzane, khona-ke u-45 km kude umuzi waseKrov. "I-Pine Forest" yindawo yokuhlenga esendaweni eqondile kusukela esikhungweni sesifunda: kwanele ukujabulela imvelo, kodwa ngesikhathi esifanayo kungenzeka ukuba uthole ngokushesha izinzuzo zempucuko.
Kuphi ukubeka abagibeli bamaholide?
Inombolo yezindawo zokubhuka zenzelwe ukwamukelwa ngesikhathi esisodwa kwabantu abangu-220. Hlela izivakashi ezifika ukuze ziphumule kwelinye lalezi zindlu ezinhlanu eziphephile. Lezi zakhiwo ziqukethe amakamelo angashadile, aphindwe kabili nantathu azinhlobonhlobo ezahlukene. Izibuyekezo zithi ngisho nekamelo elijwayelekile lihlonyelwe i-TV, ifriji, i-kettle kagesi enezidingo ezidingekayo, futhi i-cubicle entsha yeshayi, izinwele zezinwele nezesekeli zokuhlanzeka zisendlini yokugezela. Isigaba salolu gumbi (futhi, ngokulinganayo, intengo yalo) kuxhomeke kakhulu lapho ukulungiswa kokugcina kwenziwa. Isibonelo, esakhiweni sesibili asikakenziwa. Izivakashi ezibuyekezweni zabo zincoma lapho zibhuka ekamelweni lokubhuka ezakhiweni zesithathu nesine. Esikhathini sesishiyagalolunye sendawo kukhona amakamelo esigaba se "Okunethezeka", okufaka amakamelo amaningana. Esikhathini sesibili sakhiwo, lezi zakhiwo zikhona phansi. Kodwa lokhu, ngokusho kwezivakashi eziningi, akubangeli izinkinga ezikhethekile. Phela, amakamelo ayisithupha kufanele abe nemvula emibili kanye nezindlu zangasese ezintathu.
Ubani okhuthaza ukwelashwa endaweni yokuphumula yezempilo?
Isikhungo sezempilo sinesimo, sifaneleke njengegatsha leJSC RZD-Zdorovie (Kirov). "Ihlathi lePine" liyisikhungo sephrofayela enkulu. Lapha baphikisana ngokuphumelelayo nezifo zesimiso sokuphefumula, isimiso se-musculoskeletal kanye namaphazamisi emathunjini, izifo zemizimba nezifo zezinzwa. Izinkomba, lapho udokotela athumela khona eSosnovi Bor, nazo zikhona nezinkinga ze-ENT, ukugula okungapheli, ukukhathazeka kwempilo yabesifazane. I-sanatorium itholakala endaweni ehlukile. Ukuphulukisa umoya ehlathini le-pine, kunomthelela omuhle emzimbeni, ngoba ngokucwengile kufaniswa nendawo yesifunda sase-Elbrus. Indawo yokuphumula yezempilo inomthombo wayo wamanzi amaningi ase-sodium chloride. Le nqubo ihilela udaka lwama-sulphide-silt lendawo. Futhi ngokuphuza, amanzi okwelapha avela ku-Nizhneivkinsky keys No. 2K no-12 aziswa.
"Ihlathi lePine" (i-sanatorium, esifundazweni sase-Kirov) inikeza ukutholakala okuphelele komzimba. Abasebenzi bezokwelapha abagcini nje ngabahlengikazi nabahlengikazi, kodwa futhi nabachwepheshe bephrofayli encane: i-otolaryngologist, i-neurologist, isazi sezinkinga zezinzwa, nodokotela wamazinyo. Esikhathini sempilo, ungaqhuba ukuhlolwa okuphelele komzimba, ikakhulukazi, ukuthola i-ultrasound ne-iridodiagnostics. Yini ephawulekayo, izinqubo zokwelapha zabaholi bamaholide zigcinwa nsuku zonke, ngaphandle kwezinsuku. Ukwazi kahle amanzi wamaminerali kwenza kube lula ukuthola izinsiza ze-balneotherapy. Ukubhukuda echibini, namabhati e-pearl, nokuzihlanganisa komphefumulo ohlukahlukene. Kanye nokuphuza kwamanzi amaminerali emithonjeni yokuphulukisa, i-phyto-, laser, i-apparatus nezinye izindlela zokwelapha zisetshenziswa. Ukuqeda izifo ze-ENT, kusetshenziselwa ukuvuza okuhlukahlukene. Ukwelashwa kwezidaka kuyigatsha elibalulekile emkhakheni wezokwelapha we-sanatorium. Lapha, kokubili ama-wraps jikelele nezinhlelo zendawo zenziwa. Ukuze uthuthukise umphumela wodaka lwe-silt hydrosulphuric, sebenzisa i-CMT ne-electrophoresis. Amakhasimende amaningi ayajabula ngokuzwa ngezinqubo ezitholwe ngosizo lwe-Spa-capsule "I-Spectra Color", kanye nokukhuluma ngendlela ephakeme ye-massage.
Akuzona zonke izindlela zokwelapha ezifakiwe ezindleko zohambo. Uma uhlala esiteshini sempilo "iSosnovy Bor" (esifundeni saseKrov), udokotela uzokunikeza ukuthi ukhethe inqubo ohlwini lwamanani, ngokusho kwezinkomba zakho zezokwelapha. Ukubuyekezwa mayelana nezinsizakalo ezikhokhelwayo cishe kuhlale kulungile. Inelisekile kakhulu yiziguli eziye zagonywa. Abaningi bamaholide bezincoma batusa ukuthi bazame okungenani iseshini eyodwa ekamelweni lomuntu ngamunye "Umgodi womsedari" ngamakhambi ahlukahlukene aphunga. Kuhle ukuhlala ekamelweni elikhethekile le-ozonotherapy. Ngaphezu kwakho konke ukudumisa yi-laser kanye ne-vibration-vacuum massage eyenziwa ochwepheshe be-sanatorium. Zama futhi i-presso- ne-hirudotherapy.
"I-Pine Forest" iyindawo yokuhlenga (isifunda saseKirov siyaziqhenya ngokufanele), sidla ukudla okwesine ngosuku ngokusho komsebenzi "wesimiso semenyu". Njengoba abantu beza endaweni yezempilo ngezinkinga zesisu, izinceku zizohlinzeka izitsha ezikhethekile zokudla. Abapheki ekamelweni lokudlela bazikhethela ekuphekiseni izindlela zokupheka ukudla kwezwe laseRussia. Ngaphezu komenyu omdala, kukhona nemenyu yezingane eyenzelwe izingane kusukela eminyakeni eyisishiyagalombili kuya kweyishumi nane ubudala. Ukwakhiwa kwekamelo lokudlela kutholakala ngokwehlukana nakwezakhiwo zokulala, ngakho-ke emva kokudla uzolindelwa ukuhamba, okuyinto, ngokungangabazeki, okuyokwenza ithinte indlela yokugaya. Ngaphezu kwalokho, kukhona ibha ensimini yezokwelapha zezempilo. Kodwa iziphuzo kanye nokudla okudliwayo kudayiswa ngemali.
I-Sanatorium "iSosnovy Bor" (i-Kirov) yamukela izivakashi ezincane zonyaka wonke. Kodwa ukuze ufake ukwelashwa, isiguli esincane kufanele sibe neminyaka emithathu ubudala. Yonke imibandela idalwe ku-sanatorium ukwenza izingane zijabule futhi zithokozise. Kanye nedamu lomdala elimbiwa ngamaminerali kukhona "idiza lokugcoba", lapho izingane zithanda ukushayela amahora emanzini afudumele. Esikhathini sensizakalo yezempilo kunezindawo zokudlala ezinemijondolo ehlukahlukene kanye nokuzungezile. Futhi ngenkathi ebandayo noma ngesimo sezulu esibi sezingane ezilindele igumbi lokudlala elihle. Kubantwana abavela eminyakeni emithathu kuya kweyishumi nane, uhlelo lwezokwelapha olukhethekile lwakhiwe. Kuhlanganisa izinqubo ezinjengokusetshenziswa kwamanzi amaminerali avela emithonjeni, ukubhunga umzimba, ukuphuza amanzi, ukubhukuda kanye nemfundo yemvelo.
I-Sanatorium "iSosnovy Bor" (Kirov) izibuyekezo zibizwa ngokuthi indawo enhle kakhulu yeholide. Asikho isikhala esibhedlela nhlobo, lapho nxazonke zihlupheka iziguli. Ingqalasizinda ye-sanatorium ifanelana nabantu abanempilo futhi abakhuthele. Kuzo, izinhlelo zezempilo ezinezici ze-SPA ezinjenge "Grace", "Anti-Stress", "Life Life", "Free Breath" kuye kwadalwa. Abathandi bokuzilibazisa abakhuthele bazojabulela imidlalo nokuzivocavoca. Kukhona ihhovisi eliqashisayo lapho ungakwazi ukuqasha ibhayisikili, i-skis, i-sledges, i-snowboard, i-gear ehlukahlukene yokudoba. Ukuphathwa kwe-resort yokunakekelwa kwezempilo kwakunakekelwa ukuzilibazisa kusihlwa izivakashi zayo - ama-discos ahlale njalo, amakhonsathi, ungathatha izincwadi emtatsheni welabhulali, ucule nge karaoke, udlale amabhiliyade. Kubashayeli, kukhona ukupaka okuphephile mahhala.
Inketho enhle kakhulu yokuzilibazisa ngaphandle kwemikhawulo ebalulekile emiphakathini, enikezwa ukuthi eduze kwe-Kirov - sanatorium "Sosnovy Bor". Amanani okuhlala endaweni yokuphumula yezempilo ajwayelekile. Le mvume iklanyelwe ukuhlala esikhungweni sempilo okungenani izinsuku eziyishumi nane, ngoba kuphela kulokhu kunomthelela wokuphika oqhubekayo. Kodwa amanani entengo yamanani yesimiso anikezwa kusukela ekubalweni kwezindleko zegumbi ngosuku. Iyini intengo yeholidi endaweni yokuphumula yezempilo? I-Sanatorium "iSosnovy Bor" (i-Kirov) ibuyekezwa ngokushaya ucingo. Amanani aqala kusuka ku-rubber 2 065 (igumbi elilodwa ekwakheni № 1). Abantu ababili e-Luxe bazokwazi ukuhlala ngama-ruble angu-6,370 ngosuku. Njengoba kunikezwe ukuthi lokhu kuhlanganisa nokudla nokwelapha, kuyinto engabizi kakhulu.
I-sanatorium ehlathini lephayini - yini engcono kakhulu ekuphumuleni kwangempela nokuthola ukuthula kwengqondo.
Slide ezikhangayo izingane?
Uhlolojikelele THWGlobal.com phrojekthi: indlela ukusebenza esakhiweni, ukubuyekezwa
Umbadlana MSI 970A-G43: Ukubuyekeza, ukuhlolwa kanye nokubuyekeza
Glazing we balcony - Indlela hhayi iyangena imikhonyovu.